Ampidino Maxnote 5.0.4 ho an'ny Windows
Sehatra: Windows Version: 5.0.4 Fiteny: English
Maimaimpo Ampidino ho an'ny Windows (44.70 MB)
Ampidino Maxnote, Maxnote dia fampiharana fakana an-tsoratra izay azonao ampiasaina aminny fomba miasa aminny rafitra fiasa Windows. Maxnote dia fampiharana mandray an-tsoratra izay azonao ampiasaina aminny solosainao. Maxnote dia manolotra saika ny zavatra rehetra azonireo mpifaninana aminy atao maimaim-poana aminity faritra mifaninana ity.
Azonao atao ny mampiditra fanamarihana aminny fampiharana ao anatinny segondra vitsy ary tehirizo. Avy eo azonao atao ny mifehy sy mijery anity rindranasa telefaona ity. Iray aminireo mampiavaka ny programa ny fahafahany maka pikantsary ary hamonjy azy io haingana.
Na izany aza, Facebook, tranokalam-baovao, Tamindir.com, fandalinana akademika na inona na inona ao aminilay lahatsoratra, dia azonao atao ny mamonjy ampahany vitsivitsy aminireo lahatsoratra ireo mivantana aminny programa.Ho fanampinizany, azonao atao ny mijery ireo zavatra rehetra ireo aminny findainao sy ny solosainanao rehefa tsy manana Internet ianao, mba hahafahanao mitondra naoty na aiza na aiza tianao.
Haben'ny rakitra: 44.70 MB